Dhageyso: Dowlada Soomaliya oo ka hadashay Go’aankii dhawaan ka soo baxay Madaxweyne Trump
You are at:Home»WARARKA»Dhageyso: Dowlada Soomaliya oo ka hadashay Go’aankii dhawaan ka soo baxay Madaxweyne Trump
Dowlada Soomaliya ayaa waxa ay ka hadashay Go’aankii dhawaan ka soo baxay Madaxweynaha Cusub ee Dowlada Mareykanka Donald Trump kaasi oo wadankaasi looga Mamnuucay in ay galaan Dadka kasoo safraya 7 Dal oo Soomaliya ay ku jirto.
Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaliya C/salaan Hadliye Cumar oo Wareysi siiyay Laanta Afka Soomaliga ee VOA ayaa waxa uu sheegay in Dowlada Soomaliya ay aad uga Xuntahay go’aanka uu dhawaan ku dhawaaqay Trump waxaana uu xusay in Kan dowlad ahaan go’aankaasi ay ka soo horjeedaan.
Wasiir Hadliye wuxuu xusay in Dalka kasto uu go’aan leeyahay Mareykanka ay go’ankey doonan ka qaadan doonan dadka wadankooda soo galaya.
Hadliye wuxuu sheegay in Marka uu muqdisho ku laabto ay Golaha wasiirada Soomalia ka tashan doonan go’aanka uu trump qaatay iyo sida ay Soomaliya ay go’aankaasi uga fal celiso sida ay uga falceliyeen Dwoaldaha kale ee iyagana uu Amarkaan uu Saameeyay.
Halkaan Hoose ka Dhageyso Wareysiga Wasiir Hadliye